China HPHT BLUE စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | GIGAJEWE
စိန်ဖြတ်: Excellent က
မာကျောမှု: 10 Moh ရဲ့
စိန်အမျိုးအစား: ဒြပ် (ဓာတ်ခွဲခန်း created)
ဖန်စီစိန်အရောင်: အဝါရောင်အပြာရောင် Blace
စိန် Enhancements: ဖြည့်စိန်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: HTHP စိန်
1. လေဟာနယ်အိတ်သို့မဟုတ် poly အိတ်ထုပ်ပိုး။ 2. ပလပ်စတစ်နှင့်ပုံးအိတ်များတွင်ထုပ်ပိုး။ ဝယ်သူဝယ်လိုအားအတိုင်း။
အရေအတွက် (ကာရက်) ၁ - ၁၀ > 10
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ)3ညှိနှိုင်းခံရဖို့
HPHT, သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားဓာတ်ကူပစ္စည်းများသည်စိန်များကိုမျက်နှာပြင်အောက်ကီလိုမီတာ ၁၅၀ တွင်ပြုလုပ်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုတုပသည်။ အပူချိန် ၂,၀၀၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်နှင့် ၅.၈ ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိမြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားအောက်တွင်စိန်၏ကြည်လင်သောတည်ဆောက်ပုံကိုလွဲချော်သွားသည်။ ကာဗွန်ဒြပ်စင်သည်သဘာဝစိန်နှင့်ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်တူညီသည်။ ၎င်းသည်သဘာ ၀ စိန်များနှင့်အရည်အသွေးကွာခြားမှုမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်မှထုတ်ယူမည့်အစားဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ပြုလုပ်သောစိန်များ။ ဤရွေ့ကား knockoffs မဟုတ်, သူတို့က Cubic Zircon မဟုတ်, သူတို့ Crystals မဟုတ်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏စိန်များနှင့်မြေကြီးနှင့်တူသောဓာတုဗေဒနှင့်တူညီကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၈ နွေရာသီဖက်ဒရယ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကသတ္တုတွင်းစိန်များထက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သက်သာသည် မှလွဲ၍ ဖက်ဒရယ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကကြေငြာခဲ့သည်။
CVD စိန်ဆိုတာဘာလဲ။ ။
CVD စိန်များ (ဓာတုအခိုးအငွေ့အစစ်ခံခြင်း) သည် metord တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဓာတ်ငွေ့အတွင်းရှိကာဗွန်အက်တမ်များသည်ပုံဆောင်ခဲအရအလွှာတွင်အခြေချရန်လိုအပ်သောအခြေအနေများ ဖန်တီး၍ ဒြပ်စိန်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ CVD စိန်တစ်ခုတည်းသော crystal စိန်သည်စင်ကြယ်ပြီးအပြစ်ကင်းစင်ပြီးအမျိုးအစား IIa စိန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမှာကျွန်ုပ်တို့၏တွန်းအားဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် CVD စိန်ကိုအထူးပြုလုပ်ထားသည်။ ဤရွေ့ကားကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတန်ဖိုးများဖြစ်ကြသည်။
HPHT (မြင့်မားသောဖိအားမြင့်အပူချိန်) စိန်
HPHT (မြင့်မားသောဖိအားမြင့်အပူချိန်) စိန်များသည်ကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာအတွင်းနက်ရှိုင်းစွာစိန်များထုတ်လုပ်ပုံကိုတုပသည်။ HPHT စိန်များကြီးထွားမှုနှင့်အတူစတင်ရန်လေထု ၆၀,၀၀၀ နီးပါးနှင့်အပူချိန် ၂၅၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူချိန်ကိုတည်ဆောက်ရန်အထူးစက်များကိုအသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောသန့်စင်ထားသောဂရစ်ဖိုက်ကဲ့သို့သောစိန်ကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်သောဒြပ်စင်များနှင့်သတ္တုများနှင့်အမှုန့်များပါဝင်သောဓာတ်ကူပစ္စည်းအရောအနှောများပါ ၀ င်သည့်အထူးကြီးထွားဆဲလ်များကို HPHT အခန်းထဲသို့ထည့်ပြီးအပူချိန် ၁,၃၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြှင့်တင်ပြီးလေထုဖိအားပေါင်း ၅၀၀၀၀ ကျော်အသုံးပြုသည်။ ဆဲလ်များအတွင်းရှိဓာတ်ကူပစ္စည်းသည်ဆဲလ်များကိုအစိုင်အခဲမှအရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသည်။
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းနှင့်အခြေအနေအနည်းငယ်ကိုတွေ့ပြီးသည့်နောက်အအေးမိလုပ်ငန်းစဉ်စတင်သည်။ ၎င်းသည်ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးအက်တမ်အမျိုးအနွယ်ပေါ်တွင်ကာဗွန်အက်တမ်များကိုတည်ဆောက်စေသည်။ ဆဲလ်ကိုကြီးထွားမှုသံသရာပြီးဆုံးပြီဟုမှတ်ယူမှသာလျှင် HPHT စက်မှဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်သူနှင့်လက်ကားရောင်းဝယ်သူများဖြစ်သည့် Lab-Grown စိန်၊ ဓာတုအငွေ့ဖြစ်စေသောစိန်များ၊ HPHT စိန်။
ရှေ့သို့ HPHT အဖြူရောင်
နောက်တစ်ခု: HPHT ကြိတ်ခွဲလေ့ကျင့်